Kudzidza kwemuchina nhasi hakuna kuita sezvazvaive zvekare, nekuda kweiyo nyowani komputa matekinoroji. Sezvo mamodheru achifumurwa kune data nyowani, iyo iterative chikamu chekudzidza kwemuchina chakakosha sezvo ivo vachikwanisa kuchinjira vakazvimiririra. Ivo vanogadzira zvinodzokororwa, zvakavimbika mhedzisiro uye sarudzo nekudzidza kubva kumakomputa apfuura akapihwa kwavari. Kudzidza kwemuchina kwakazvarwa kubva papfungwa yekuti makomputa anokwanisa kudzidza asina kunyatso gadzirirwa chero basa chairo kuti rishande, ndiko kuziva maitiro uye vaongorori vari kuronga nzira dzekuona kana makomputa aigona kudzidza kubva kudhata kuburikidza chakagadzirwa njere. Vanhu vamutsidzira kufarira muchina kudzidza senge Bayesian ongororo uye dhizaini kuchera kwezvishoma zvinhu senge zvisingadhuri kuchengetedza data, zvine simba uye zvakachipa computational kugadzirisa uye kukura mhando uye huwandu hweruzivo rwuripo. Zvese izvi zvinhu zvakaita kuti zvikwanisike otomatiki uye nekukurumidza kuvaka mamodheru ayo anogona kuongorora akaomarara uye makuru data uye kununura yakajeka uye nekukurumidza mhedzisiro padanho rakakura kana zvichidikanwa. Nekugadzira chaiwo mamodheru, iwo mabhizinesi nemasangano vane mukana wakanaka wekucherechedza mikana inobatsira uye inobudirira uye kudzikisira njodzi nekuita kuti kudzidza kwemuchina kuve chinhu chakakosha mumaindasitiri epakati.
Isu tinonyatsoziva nezve mashini ekufunda mashandiro ari kufamba muhupenyu hwedu nhasi. Kwenguva yakareba, maalgorithms emuchina wekudzidza anga aripo asi izvo zvakagadziriswa ichangoburwa kugona kwekushandisa otomatiki masvomhu kuverenga kune makuru data, nekukurumidza uye nekudzokorora. Imwe yemienzaniso yatatove kujairana nayo ndeyako wega-inotyaira mota yeGoogle, yaive yakanyanyisa hyped uye yakavakirwa pakudzidza kwemuchina. Iyo ine zvese maficha emota yazvino yakasanganiswa senge adaptive cruise control, kupaka uye vabatsiri vevigator, kuziva mutauro uye nzira yemubatsiri inoita kuti ive padyo nemotokari inoshanda yakazvimiririra. Zvakare online kurudziro inopa seaya anobva kuNetflix neAmazon, kubiridzira uye kusanganisa kudzidza kwemuchina nemitauro yemitauro yekugadzira kuti uzive zvinotaurwa nevatengi nezvako paTwitter, Nanotronics, iyo inogadzira microscopes yekuona kuti ivandudze kuongororwa, Rethink Robotics ichishandisa iyo kugadzirisa kugadzirwa kwavo. vanomhanyisa uye vanodzidzisa maoko avo erobhoti, vachiwedzera chikamu chevatengi, kunyatso fungidzira kukosha kwehupenyu hwevatengi, kugadzirisa ruzivo rwevashandisi vemu-app, kuona maitiro ekutenga kwevatengi, kuongorora njodzi dzehutano, kuvandudza kuchengetedzwa kwevanhu, uye kuongorora zvirwere zvakanyatsonaka mifanidzo yezuva nezuva yemuchina kudzidza.
Iyo yakanaka muchina yekudzidza system inogadzirwa neyekutanga uye epamberi algorithms, scalability, dhata yekugadzirira kugona, ensemble modelling uye otomatiki uye iterative maitiro. Kudzidza kwemuchina kwazvino kwanyanya munhau nekuda kwekufambira mberi kwayo mu "kudzidza kwakadzama" uko kunosanganisira kukunda kwayo kwakakurumbira kweAlphaGo kwaGo gogo guru Lee Sedol uye nezvimwe zvigadzirwa zvitsva zvinoyevedza pakutenderedza kushandura muchina uye kuzivikanwa kwemifananidzo. Kudzidza kwemuchina kunoshandisa yakawanda yedata, kunoregerera zvakanyanya kwekuchinja data mapoinzi kana ma parameter uye inotsigira kuomarara kukuru uye kusiana. Izvo zvakagadzirwa zvinobuditsa nemaitiro aya zvinogona kushandiswa zvisina musono pamatanho akawanda akasiyana, senge analytics masystem, gore kadambari, Edge network uye akasimbwa masisitimu. Chinhanho chinoshanduka kubva panguva iyo nzwisiso dzainyanya kuve tekinoroji-inotungamirwa kune yekuziva nguva, iyo inogonesa bhizinesi-rinotungamirwa nzwisiso. Muchina kudzidza, IoT neAI mhando dzakabatana. IoT inokwenenzvera kugona kwehungwaru kana zvasvika kune chaiyo-nguva komputa. Rudzi rwomunhu rwaizokurumidza kutsiviwa chose chose nemichina yokufamba iyo yaizova yakangwara zvikuru kupfuura zvatiri. Iwo michina akatotanga kupinda mumabhizinesi nekuda kwezvakasiyana zvinangwa uye munguva iri kuuya, taizoona mafungu ekushandurwa kwemichina achichinjisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva zvakare. Idzi dynamos dzevanhu dzinochinja nzira dzedu dzekutarisa kuhupenyu nekuvaka maonero kubva kune data ravanogamuchira uye nenzira idzo vanhu vasina kumbogona. Izvi zvaizoreva kuti michina inozobuditsa simba revanhu mune zvese zvinhu zvinokonzeresa shanduko, kudhura kwemutengo uye hukuru uye hwakasimba huwandu hwemagetsi. Mifananidzo neizwi kucherechedzwa masisitimu anozoziva vanhu munzira dzakasiyana siyana uye maererano neongororo, makambani ari kukura nekukurumidza achange aine michina yakangwara kupfuura vashandi.